प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर प्रस्थान- कस्तो छ स्वास्थ्यस्थिति ? (चिकित्सकको विज्ञप्तीसहित) – Nepal Japan
नेपाली समय : 03:53:38
जापानी समय : 07:08:38
प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर प्रस्थान- कस्तो छ स्वास्थ्यस्थिति ? (चिकित्सकको विज्ञप्तीसहित)
22 August, 2019 20:40 | राजनीति | comments | 21750 Views
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गर्नुभएको छ । थाई एयरको नियमित उडानबाट उहाँ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली साउन १८ गते सिङ्गापुरस्थित नेशनल युनिर्भसिटी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराई साउन २७ गते स्वदेश फर्कनुभएको थियो । सोही बेला चिकित्सकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः एक पटक परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । चिकित्सकको सोही सुझावअनुसार स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री ओली बिहिबार पुनः सिङ्गापुर प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरले अर्काको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको १० वर्षपछि चिनेको छ । अर्काको मिर्गौला हो भन्ने चिनेपछि शरीरले अस्वीकार गर्न एन्टिबडिज बनाउन थाल्छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको पनि त्यही भएको वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ प्राडा ऋषिकुमार काफ्ले बताउनु हुन्छ ।
काफ्लेका अनुसार एन्टिबडिज हटाउन ‘प्लाज्मा फेरेसिस’ गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियामा रगतबाट एन्टिबडिज निकालिन्छ अथवा एन्टिबडिज बढ्न नदिने औषधि प्रयोग गरिन्छ । यो उपायले कसैलाई फाइदा पनि गर्छ, कसैलाई नगर्न सक्छ । एक–दुईपटक गर्दा सुधार भए थप केही पटक गर्नुपर्छ । एक–दुईपटकमा सुधार नभए थप प्रयास गरिँदैन । तर, मिर्गौलामा सुधार भए, नभएको दुई सातामै स्पष्ट हुन्छ ।
प्लाज्मा फेरेसिसबाट सुधार नभए मिर्गौला प्रत्यारोपण वा डायलाइसिसमै जानुपर्छ । मिर्गौलाले पिसाबबाट फाल्न नसकेर रगतमा जाम भएको फोहोर डायलाइसिस गरेर हटाइन्छ । डायलाइसिसमा रगत क्रमशः बाहिर निकालिन्छ, सफा गरिन्छ र पुनः राखिन्छ ।